कुन कोरोना खोपको मूल्य कति ? - Kantipath.com
कुन कोरोना खोपको मूल्य कति ?
नेपालले गत फागुन महिनामा भारतको सेरम इन्स्टिच्यूटबाट कोभिड १९ विरुद्धको अक्सफोर्ड एन्स्ट्राजेनिका (कोभिशिल्ड) खोपको २० लाख डोज खरीद गर्ने निर्णय गर्यो । प्रति डोज ४ अमेरिकी डलरका दरले नेपालले उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरेकोमा १० लाख डोज आउनै बाँकी छ ।
चीनकै अर्को खोप सिनोभ्याकले कोरोना भ्याकको नामबाट खोप उत्पादन गरेको छ । यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्विकृति दिइसकेको छैन तथापि धेरै मुलुकहरुले यो खोप प्रयोग गरिसकेको छन् । यो खोपको मूल्य पनि प्रति डोज १० डलरकै हाराहारीमा पर्ने देखिएको छ । कम्बोडियाले उक्त खोप गत मार्च महिनामै प्रतिडोज १० डलरमा किनेको थियो भने ब्राजिलले सिनोभ्याक खोप १०.३० डलर प्रतिडोजमा किनेको छ । इण्डोनेसियाले भने प्रति डोज १४ अमेरिकी डलर तिरेको थियो । यो खोपको प्रभावकारीता ८३ प्रतिशत हुने क्लिनिकल ट्रायलबाट देखिएको छ । बीबीसी, ब्रिटिस मेडिकल जर्नल, रोयटर्स, बायोस्पेस डटकम लगायतका एजेन्सीहरुको सहयोगमा अनलाइन खबरले तयार परेको समाचार साभार गरिएको ।
Previous Previous post: १० लाख कोरोना खोप लिन चीन जाँदै वाइडबडी
Next Next post: रक्षक नै भक्षक : रक्सी चोरेको आरोपमा ३ प्रहरी निलम्बित